Akụkọ - Gịnị kpatara ụfọdụ nkịta ji enwekarị hyper karịa ndị ọzọ?
Anyị na-ahụ nkịta gburugburu na ụfọdụ n'ime ha yiri ka ha enweghị ume na-enweghị njedebe, ebe ndị ọzọ na-ala azụ. Ọtụtụ ndị nne na nna na-ahụ maka anụ ụlọ na-adị ngwa ịkpọ nkịta ha nwere ume dị elu "akwa," gịnị kpatara ụfọdụ nkịta ji enwekarị hyper karịa ndị ọzọ?
Ndị Ọzụzụ Atụrụ German, Collies Border, Golden Retrievers, Siberia Huskies, Terrier — kedụ ụdị nkịta ndị a niile nwere? A zụrụ ha ịrụ ọrụ siri ike. Ha na-adi feisty na hyper.
Oge nwa nkita
Dogsmụ nkịta na-eto eto na-enwekwu ume na ndị okenye nwere ike ịmalite ịka nká, ma ụfọdụ nkịta na-agbasi ike maka ndụ ha niile, ọ dabere na ahụike ha. N'ime afọ ndị a na-eto eto, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọzụzụ kwesịrị ekwesị, na nkwalite dị mma bụ isi ihe na-eme ka nkịta nwere ume zuru oke na afọ ha.
A na-ejikarị nri ndị dị ọnụ ala jupụta ihe ndị nkịta gị achọghị, dị ka ihe nzacha, ihe ndị na-emepụta, agba, na shuga. Inye nkịta gị nri dị ala nwere ike imetụta omume ha, dị ka iri nri ratụ ratụ nwere ike ịgbanwe ọnọdụ anyị. Ihe omumu nwere nmekorita n'etiti aru aru na ufodu ihe oriri nkita, ya mere o bu ihe ezi uche inye nkita nri gi di nma.
Nkịta siri ike chọrọ mmega ahụ na-esochi otu oge n'otu oge ka gị na enyi ha kachasị amasị ha. Play nwere ike igwu egwuregwu ahụ na ha. Ọ ga-abụkwa na nkịta nkịta ahụ ga-aga, njem ị ga-aga na ogige nkịta ga-eme ka ha na-agbagharị, na-akpakọrịta, na ike gwụrụ oge.